Kedu otu esi enweta ezigbo backlinks na nnwere onwe na ụzọ dị mfe?
Njikọ ndị dị n'èzí ma ọ bụ na-abanye dị ka engine maka SEO n'oge anyị. Backlinks nwere mmasị dị ukwuu site na engines ọchụchọ, karịsịa Google ma nyere ha aka ịchọpụta ebe nrụọrụ weebụ n'usoro na nsonaazụ ọchụchọ. Dika ufodu uzo si kwuo, njikọ ndi ozo abughi ihe abuo abuo nke Google mgbe ihe di mkpa. Enweghị backlinks azụmahịa gị agaghị ahụ anya site na ndị ahịa gị nwere ike ị ga-abụ ndị na-akpata ọnwụ.
N'oge a, ogo algorithms na-arụ ọrụ ọ bụghị otu ihe dịka ọtụtụ afọ tupu mgbe ọnụọgụ ndị na-abata bụ ihe kachasị mkpa maka njirisi njikọ njikọ bara uru. Ugbu a, engines ọchụchọ na-enyocha àgwà backlinks karịa ọnụ ọgụgụ ha - verdstein. Ọ bụ ihe dị mkpa nke sitere na ya na njikọ gị na-abịa na otú ha si dị mkpa na ọdịnaya dị na weebụsaịtị. N'ezie, engines ọchụchọ na-eji ọtụtụ ihe iji chọpụta ogo nke inbound njikọ maka ogo saịtị. Otú ọ dị, ndị na-ewu ụlọ ọrụ nwere ahụmahụ na-ama ọdịiche dị n'akụkụ anọ dị iche iche - mkpa, ntụkwasị obi, iche iche, na ikike. Ya mere, njikọ niile gị na-abata kwesịrị iso ndụmọdụ anọ a dị mkpa. Ọ bụrụ na ha anaghị agbaso ihe ndị a, ị ga-anwale ịkwalite mma ha ma ọ bụ jiri Google Disavow Tool wepụ ha ma ọlị.
Ya mere, ka anyị tụlee ụfọdụ ihe dị mkpa iji nweta akara azụ azụ dị mma site na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama.
Ụzọ iji nweta ezigbo backlinks iji melite ọkwa saịtị weebụ
Nzube njikọ ụlọ abụghị ịme ka njikọ gị dị mma bụ ime ka njikọ gị dị mma. Ụzọ kachasị mma iji mepụta backlinks bụ imepụta mma na itinye ọdịnaya iji mee ka ndị ọrụ jikọọ na ya. Otú ọ dị, n'eziokwu, ọ bụghị mgbe nile ka ọ na-eme. Ụzọ dị irè karị bụ iji lekwasịrị anya na ebe nrụọrụ weebụ siri ike na ọdịnaya ha ga-achọ ijikọta. Nsogbu bụ na ọ siri ike ịnweta njikọ sitere na saịtị PageRank dị elu n'ihi na ha na-arụ ọrụ nanị site na ngalaba ndị a ma ama ma nwee ụkpụrụ dị oke elu.Otú ọ dị, na paragraf a, anyị na-achịkọtara gị ụfọdụ atụmatụ njikọ njikọ dị irè nke ga-enyere gị aka inweta ezigbo backlinks.
Usoro ihe mgbochi nke Brian Dean hiwere
Ikwesiri ịme nchọpụta nyocha ahịa gị ma chọta weebụsaịtị ma ọ bụ ibe weebụ ndị na-adịkwaghị. N'ọzọ ọzọ, ịkwesịrị iji usoro ọ bụla na-arụ ọrụ na-ejikọta ọrụ ma chọpụta ngalaba ndị jikọtara na ibe ahụ nke adịkwaghị adị. Iji nweta ihe ọmụma a, ị nwere ike iji Sistem Nchịkọta Nchịkọta ma ọ bụ Ngwá Ọrụ Ngwá Agha Dị Nsọ. N'ọgbọ ọzọ, ọ dị gị mkpa ịmata ọdịiche dị na ụlọ ọrụ gị na ngalaba bara uru. Mepụta ọdịnaya ọhụrụ ma ọ bụ buru otu n'ime isiokwu gị ndị dị ugbu a ma ọ bụrụ na ha agbanye aka na isi ma nye ndị nwe saịtị ahụ iji dochie njikọ na-adịghị adị na ọhụrụ site na saịtị gị. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị nwe ụlọ ọrụ na-ekwenye na nke a dịka ọ bụ ohere magburu onwe ya maka ha iji mepụta njikọta njikọ ha na otu backlink backlink.
Usoro nnọchighasị njikọ
Na mbido, o nwere ike ịdị ka Brian Dean nke e kwuru na mbụ. Otú ọ dị, ọ bụghị otu ihe ahụ. Dịka usoro a si dị, ị ga-enyocha ngalaba gị echekwara ma chọpụta njikọ ndị gbawara agbawa nke na-eduga na ibe ndị na-adịghị adị. Mgbe ahụ site na iji Google Chrome Broken Link Checker Extension, ịchọrọ ịchọta njikọ ndị na-ezo aka na peeji nke njehie site na otu ebe nrụọrụ weebụ. N'iji agbatị Google a, ị ga-enwe ike ịchọta ọnụ ọgụgụ na-adịghị agwụ agwụ nke njikọ njikọta. Ịkwesịrị ịtọpụta njikọ ndị a ma chọpụta naanị ndị dị mkpa na ndị na-azụ ahịa. Mgbe ahụ ịkwesịrị ịmepụta otu ihe ederede na otu isiokwu ahụ na ebe nrụọrụ weebụ gbasara ma gbalịsie ike na-emeso ngalaba ezubere iche, inye ha ka ha jikọọ na saịtị gị kama nke njehie otu.